Semalt: Iintlanzi zeSpammers zisebenzisa Ukuphumelela?
UMichael Brown, Semalt , uthi akukhathazeki ukuba uyilumkile kangakanani, ugaxekile uya kuhlala ufumana i-imeyli yogaxekile kwibhokisi lakho lebhokisi. Yintoni enzima ukuyiqonda indlela abagaxekile abaphatha ngayo ukufumana zonke iilesi zamakheli. Nangona unokuthatha amanyathelo okuthintela, akukho nto ongayenza ngayo umcimbi. Ekuhambeni kwexesha, abagaxekile bafumana indlela yokufumana idilesi ye-imeyile. Abasebenzisi bamane bahluleka ukuqonda isizathu esivela kulo mkhuba oyingozi.
I-Voxbox yaseKhanada ye-World Telecom Inc ayiqwalaselwe njengenkampani enenzuzo. Nangona kunjalo, abagxeki abonakala bengakhathalele oko. Ugaxekile ozibiza ngokuba nguFrancis unxilise le nkampani kwimilayezo yeposi. UFrancis wazithenga izitokisi kwiVoxbox waza wagqiba ekubeni athumele imilayezo ye-spammy ukuba athole ummkeli onobukratshi aze athengise izabelo zakhe kwinzuzo.
Leyo sikimu se-stock "yokulahla kunye nokupompa" iyaba yintanda kakhulu. Nangona unesihlunu sogaxekile, ugaxekile uhlala efumana indlela yokubaphepha ukuqinisekisa ukuba i-imeyli yabo yogaxekile ihanjiswa kummkeli oyifunayo. Bakhetha ukusebenzisa icebo elikhankanywe ngasentla kuba libavumela ukuba baphumelele ngaphandle kokuba banxibelelwano kwiwebhusayithi abaya kugaxekile. Bonke abayidingayo ngumyalezo ohlamba isitokisi.
Uphando oluqhutywe nguJonathan Zittrain, uprofesa waseYunivesithi waseOxford kunye noLaura Frieder, uprofesa oncedisayo weYunivesithi yase-Purdue, ubonise ukuba isizathu sokuba abagaxekile baphumelele kukuba ezi zicwangciso zisebenza! Ukuba yonke into iyahamba ngokwecebo, yenza malunga neepesenti ezi-5 zibuya xa abo bakwazi ukuthenga i-stock yabo balahlekelwa malunga nama-7 ekhulwini.
Iindaba ezilungileyo kukuba ungasebenzisa indlela elula kodwa esebenzayo yokulahla i-spammers. Okokuqala, kufuneka ususe ugaxekile. Kungakhathaliseki ukuba mnandi kwaye uyilinga umnikelo, xhathisa kwaye ungathengi i-stock. Ngenxa yokuba uninzi lwabantu luwuthenga nje ngokuba abaqondi ukuba lugaxekile. Kwaye khumbula ukuba ukuzama ukwenza ibhokhwe ngokukhawuleza kunokudlala amacandelo kuwe.